Cumar Cabdirashiid Cali oo shirka oo soo xiray shirka dib u eegista dastuurka – STAR FM SOMALIA
R/wasaaraha dalka ayaa soo xiray shir looga hadlayay arrimaha dastuurka oo muddo Sadex maalmood ah ka socday magaalada Muqdisho.
Shirkaan oo ay soo qaban qaabisay wasiradda arrimaha dastuurka ee xukumadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxaa ka qeybgalay wasiirrada dastuurka ee maamul goboleedyadda ka jira dalka.
Shirka oo ay soo qaban qaabisay wasaradda Dastuurka ee xukumaddda Soomaaliya ayaa looga hadlay dar-dar galinta geeddi socodka dib u eegista dastuurka KMG ah ee dalkeena iyo sidii maamul gobolyeedyadu ay kaalin ugu yeelan lahaayeen howlaha dib u habaynta dastuurka,
Mudane Xuseen Maxamuud Sh.Xuseen wasiirka Arrimaha dastuurka ee xukumadda Soomaaliya oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in 10 qobad ay isku afgarteen ay muhiim u tahay dib u eegista dastuurka dalka .
R/wasaare Cumar Cabdirashiid Cali oo shirka soo xiray ayaa tilmaamay in dastuurka dib u egistiisa lagu saleeyo in uu noqdo mid ka shaqeeya horumarka iyo midnimadda ummadda Soomaaliyeed.
Shirkaan wada tashiga ah ee lagu soo gaban gabeeyey magaladda Muqdisho oo ay isugu yimadeen wasiiradda arrimah dastuurka ee maamul goboleedyadda dalka ayaa qayb ka ah qorshaha la doonayo in dastuurka KMG ah looga dhigo mid rasmi ah oo uu leeyahay dalkena.